Ọdụ nke ụzọ ụgbọ oloko gọziri Britain nke metụtaworo akụkọ ọdịnala na mmepe akụ na ụba maka ọgbọ. Na ọ bụrụ na ị na-na na a ụgbọ okporo ígwè enthusiast, a UK okporo ígwè ezumike mmemmem na-adọrọ mmasị eme ihe na ebe niile si Aberdeen ka Penzance. So if your heart’s set…
Ụzọ ka mma na-eji oge gị n'oge okpomọkụ karịa njem gburugburu Europe, nri? Right. Ị na-adịghị na-agbaji akụ ịhụ ụfọdụ nke ọmarịcha Europe n'isi obodo; kwere na ya ma ọ bụ na, ma onye nke oké egwu akụkụ nke gị na-eri-irè Europe njem na-ahọrọ…